Sexy Rugby မှအမျိုးသားဝတ် Retro Boxer၊ ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » လက်ဝှေ့သမား retro လူတို့, Sexy ရပ်ဘီအားဖြင့်ဂန္
အမြိုးသမီးမြားခွင့်ရှိပါက shorty များလွန်းသောသူတို့အဘို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြ, ယောက်ျား, ဒါဟာလက်ဝှေ့သမားဿုံနေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးနှစ်သိမ့်ပေးစဉ်ခါးဆစ် masculine မှကိုက်ညီနေသည်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာအစက၎င်း၏ကျက်သရေကြောင်းထူးခြားတဲ့ retro စတိုင် sports ။ ဒါကြောင့်သင်ကကြိုးစားရန်အဆင်သင့်ရှိသနည်း
တစ်ဦးက retro စတိုင်ခေတ်သစ်နှစ်သိမ့်
၎င်း၏ retro ကြည့်သငျသညျကြှနျုပျသှေးဆောငျပါလိမ့်မယ်။ retro chic ပါ! သူကစင်မြင့်၏ရှေ့မှတစ်ဖန်ပြန်လာနှင့်ရပ်ဘီဆိုင် Sexy ထို့ကြောင့်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းမှအဆင်ပြေအောင်အသစ်တစ်ခုအပိုင်းအစပေးထားပါတယ်။ အနက်ရောင်၌ဤလက်ဝှေ့သမားက M, L, XL နှင့် XXL သောကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်အဆိုပြုထားသော။ အဆိုပါလက်ဝှေ့သမားဟာ wearer မှကောင်းသောအထောက်အပံ့နှင့်နှစ်သိမ့်ပေးမယ့်တင်းကျပ်စွာဖြတ်ရှိပါတယ်။
တိုက်ရိုက် 1950 နှစ်ပေါင်းမှုတ်သွင်းသည့်ထူးခြားသောစတိုင်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဆင်းကို retro ပုံရသည်ဆိုပါက၎င်း၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်နှစ်သိမ့်အတွက်ခေတ်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်ဝှေ့သမား၏အထည်အပြည့်အဝဝါဂွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဓိကမှာ, ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစား နှစ်ဆအထူရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့အားဖြင့်အဆိုပြုထားအဆိုပါလက်ဝှေ့သမားယောက်ျား retro စတိုင် sexy ရပ်ဘီဆိုင် တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီအတွက်ကြောင့်သင့်ရဲ့အသားအရေက၎င်း၏ခက်ခဲတဲ့ဝါဂွမ်းမှကျေးဇူးတင်စကားရှူဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သူသည်ဘောင်းဘီတို, ဘာမြူဒါဘောင်းဘီတို, ဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ရွရွပြေးအောက်မှာအလွယ်တကူဆောင်ခဲ့လေ၏။ သူကအပြင်မှာညစာစားအပေါင်းတို့, သင့်ရဲ့အားကစားလေ့အကျင့်၌သင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါလာပါလိမ့်မယ်။
ခရစ်စမတ်အဘို့သင့်ချစ်ရသူကိုနှစ်သက်လိုပါသလား? သစ်ပင်အောက်၌အံ့အားသင့်ဖန်တီးရန်၎င်း၏ထူးခြားသောနှင့်မူရင်းစတိုင်မူတည်ပြီး! နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်စတိုင်အဘယ်သူမျှမနောက်ထပ်မကွညျ့နှငျ့သငျမေ့လျော့မည်မဟုတ်တစ်ဦးခရစ်စမတ်အဘို့လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်အားကိုး, လူတို့အားအယူခံလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဂန္ sexy ရပ်ဂ်ဘီအမှတ်တံဆိပ်
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ "တစ်ဦးကဂန္: အတီရှပ်လူကို SR (Sexy ရပ်ဘီ)
timeless ရပ်ဘီချွေးထွက် unisex, "